သင်မသိသေးတဲ့ ရွှေမှုံရတီ ရဲ့အကြောင်းတွေ - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / သင်မသိသေးတဲ့ ရွှေမှုံရတီ ရဲ့အကြောင်းတွေ
သင်မသိသေးတဲ့ ရွှေမှုံရတီ ရဲ့အကြောင်းတွေ
Apann Pyay 3:44 PM သရုပ်ဆောင်များ Edit
အိမ်နာမည် – သဲသဲ
ကျောင်းနာမည် – နှင်းဝတ်ရည်သောင်း
သူမက အလှကြိုက်တာ မေမေ့ ကြောင့်ပါတဲ့။ မူလတန်းအရွယ်အထိ ညဘက်အိပ်ရင်တောင် သနပ်ခါးလိမ်း၊ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုး၊ ဆံပင် ကို သေသေချာချာဖြီးပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ သာသာလေးအိပ်တတ်တယ်။
မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိ ညကအိပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ အရမ်းဝါသနာပါခဲ့တယ်။ အလှ လည်း ကြိုက်တ ယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်း ၀ါသနာပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ သူမကိုအားလုံးက အနုပညာအလုပ် လုပ်စေချင်ကြတယ်။
အလှကြိုက်တဲ့ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး အနုပညာလောက ထဲကို ဘယ်လို ရောက်လာလဲ. . . ဒီလော ကထဲကို ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပဲ။ သဲ (၅) နှစ်သမီးအရွယ်မှာ ပဲခူးကနေ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ ကျောင်းကအထက(၃) တာမွေမှာတက်တယ်။
အနုပညာအလုပ်လုပ်တော့ အသက်က(၁၃) နှစ်ကျော်ပေါ့။ သဲကအသက်ကြီးလာရင် လေယာဉ်မယ်ဖြစ်ချင်တယ်။ Smart ကျကျကလေး လှချင်တယ်။ ဒါကြောင့် star and model international မှာ သင်တန်းတတ်ခဲ့တယ်။ ပွဲတွေတော့ လျှောက်ဖူးတယ်။
ပြိုင်ပွဲတော့ မပြိုင်ခဲ့ရဘူး။ အနုပညာပျိုးခင်းက သရုပ်ဆောင်သစ်တင်ဖို့ သင်တန်းမှာ လာရွေးရင်း အဆင့်ဆင့်အရွေးခံပြီး ဒီလောကထဲကို ရောက်လာတာပါ။
စကားပြောသွက်လက်ပြီး အရမ်းကိုပါးနပ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်လို့ သူမ ကိုသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ သူမအသက် ကအခု (၁၆) နှစ်။အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အပီအပြင်လုပ်တယ်။ အနုပညာသတ်တမ်း (၂) နှစ်ကျော်အ တွင်းမှာ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်း (၁၀၀) ကျော်နဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီး (၉) ကား ရိုက်ပြီးပါပြီတဲ့။
သရုပ်ဆောင်အလုပ်ဆိုတာ စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် အသက် ၁၃ နှစ်ကျော် ကတည်းကအနုပညာ အလု ပ်စလုပ်တော့ အတွေ့အကြုံ လေ့လာချိန်မရှိပဲ ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးအရွယ် ၁၃ နှစ်သမီးရဲ့ သရုပ်ဆောင် အနုပညာက တစ်ကယ့်ကိုအံမခန်း တာထွက်ကောင်းခဲ့တယ်။
သရုပ်ဆောင်စလုပ်တော့ ကြောက်ခဲ့သေးလား… ကြောက်စိတ်ကိုမရှိတာ။ မော်ဒယ်သင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ သရုပ်ဆောင်လည်း ၀ါသနာပါတယ်။ စံကားဝါ သရုပ်ဆောင်သင်တန်း ကိုတက်ခဲ့တယ်။ သင်တန်း မှာ ဆရာ တွေက အရှေ့ထွက်ပြီးတစ်ခုခု လုပ်ပြရမယ်။
ဘယ်သူထွက်မလဲမေးရင် အမြဲတမ်းအရှေ့ထွက်ခဲ့သူပါ။ ရဲဒင်းပုဆိန်လို့တောင်ခေါ်ကြတယ်။ လူလည်းမကြောက် ဘူး၊ေ ကြာက်စိတ်လည်းမရှိဘူး။ ကျောင်းမှာလည်း အဲလိုပဲ။ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့လည်း ရန်ဖြစ်တယ်။အခန်းထဲမှာ ဆရာ မရှိရ င် အတန်းဗိုလ်ပဲ။
ကြောက်စိတ်မရှိတာ ဘယ်မှာပြဿနာတတ်လည်း ဆိုတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ။ ကိုခန့်နဲ့ဇာတ်ကား စရိုက်တယ်။ ငိုရတဲ့ဇာ တ်ကား ဒါရိုက်တာက ဦးမျိုးမင်း။ အဲဒီကားမှာ ငိုရမှာ။ ကိုခန့်လည်း ငိုနေပြီ။ ကိုခန့်နဲ့အပြိုင်ငိုရမှာကို မျက်ရည်က လုံးဝ မကျဘူး။
လူကြီးတွေဘယ်လိုပြောပြော ဘယ်သူကိုမှ မကြောက်ပဲ မငိုတာလေ။ ဘယ်လိုမှလည်း သင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာအမေက စိတ်ဆိုးပြီး ၀င်ဆူမှငိုလို့ရသွားတာ။ ဒါကတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ။ နောက်တော့လည်း လူကြီးတွေက သမီးရေ…ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ဆိုလည်း လုပ်လိုက်တာပဲ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ သရုပ်ဆောင်ပညာကို နားလည်လာသလိုတော့ရှိလာပြီ အကုန်လုံးတော့ မသိသေးဘူးပေါ့လေ… ပညာဆိုတာ သင်ယူလို့မှ မကုန်တာကိုနော် ယခုဆိုရင် ရွှေမှုန်ရတီ ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုဟာဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ရင်းနဲ့မှ အနုပညာပျိုးခင်းရဲ့အစ်ကို ဆရာတွေရဲ့ သင်ကြားပေးမှု၊ ၀ါရင့် အနုပညာရှင် တွေရဲ့ လက် တွဲခေါ်မှုတွေကြောင့် ပရိ သတ် အသိမှတ်ပြုတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ နေရာတစ်ခုအောင်မြင်မူတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ထိုးနှ က်ချက်ဆိုတာရှိစမြဲပါပဲ။ သူမက အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်လိုခံယူထားလဲ။
“ပတ်ဝန်းကျင် က တစ်ခုခုပြောရင် သူတို့ဘာ လို့ ပြောတာလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ သူတို့ ငါ့ကိုဘာလို့ ဒီလိုပြောတာလဲ၊ ပြောရက်လိုက်တာဆိုမျိုးတော့ တွေးတယ်။
နာကြည်းတာစိတ်ဆိုးတာမျိုး မရှိဘူး။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြော ပြောပါ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်တစ်ခုရယ် ဘာကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်လည်း အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပါ”
Credit: : Myanmar People Magazine
အိမျနာမညျ – သဲသဲ
ကြောငျးနာမညျ – နှငျးဝတျရညျသောငျး
သူမက အလှကွိုကျတာ မမေကွေ့ောငျ့ပါတဲ့။ မူလတနျးအရှယျအထိ ညဘကျအိပျရငျတောငျ သနပျခါးလိမျး၊ နှုတျခမျးနီ ဆိုး၊ ဆံပငျ ကို သသေခြောခြာဖွီးပွီး ခေါငျးအုံးပျေါမှာ သာသာလေးအိပျတတျတယျ။
မနကျမိုးလငျးတဲ့အထိ ညကအိပျခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုငျးပဲတဲ့။ ဓာတျပုံရိုကျတာ အရမျးဝါသနာပါခဲ့တယျ။ အလှ လညျး ကွိုကျတ ယျ၊ ဓာတျပုံရိုကျတာလညျး ဝါသနာပါခဲ့တယျဆိုတော့ သူမကိုအားလုံးက အနုပညာအလုပျ လုပျစခေငျြကွတယျ။
အလှကွိုကျတဲ့ အရပျရှညျရှညျနဲ့ ခဈြစရာကောငျမလေး အနုပညာလောက ထဲကို ဘယျလို ရောကျလာလဲ. . . ဒီလော ကထဲကို ဘယျလိုရောကျလာလဲဆိုတော့ကြောငျးတကျရငျးနဲ့ရောကျလာခဲ့တာပဲ။ သဲ (၅) နှဈသမီးအရှယျမှာ ပဲခူးကနေ ရနျကုနျကို ပွောငျးလာခဲ့တယျ။ ကြောငျးကအထက(၃) တာမှမှောတကျတယျ။
အနုပညာအလုပျလုပျတော့ အသကျက(၁၃) နှဈကြျောပေါ့။ သဲကအသကျကွီးလာရငျ လယောဉျမယျဖွဈခငျြတယျ။ Smart ကကြကြလေး လှခငျြတယျ။ ဒါကွောငျ့ star and model international မှာ သငျတနျးတတျခဲ့တယျ။ ပှဲတှတေော့ လြှောကျဖူးတယျ။
ပွိုငျပှဲတော့ မပွိုငျခဲ့ရဘူး။ အနုပညာပြိုးခငျးက သရုပျဆောငျသဈတငျဖို့ သငျတနျးမှာ လာရှေးရငျး အဆငျ့ဆငျ့အရှေးခံပွီး ဒီလောကထဲကို ရောကျလာတာပါ။
စကားပွောသှကျလကျပွီး အရမျးကိုပါးနပျတဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျလို့ သူမ ကိုသတျမှတျခငျြပါတယျ။ သူမအသကျ ကအခု (၁၆) နှဈ။အသကျငယျငယျနဲ့ ကရြာဇာတျရုပျကို အပီအပွငျလုပျတယျ။ အနုပညာသတျတမျး (၂) နှဈကြျောအ တှငျးမှာ ဗှီဒီယိုဇာတျကားပေါငျး (၁၀၀) ကြျောနဲ့ရုပျရှငျကားကွီး (၉) ကား ရိုကျပွီးပါပွီတဲ့။
သရုပျဆောငျအလုပျဆိုတာ စိတျနဲ့လုပျရတဲ့ အလုပျဖွဈတာကွောငျ့ အသကျ ၁၃ နှဈကြျော ကတညျးကအနုပညာ အလု ပျစလုပျတော့ အတှအေ့ကွုံ လလေ့ာခြိနျမရှိပဲ ဇာတျကားတှကေိုရိုကျခဲ့ရတဲ့ကလေးအရှယျ ၁၃ နှဈသမီးရဲ့ သရုပျဆောငျ အနုပညာက တဈကယျ့ကိုအံမခနျး တာထှကျကောငျးခဲ့တယျ။
သရုပျဆောငျစလုပျတော့ ကွောကျခဲ့သေးလား… ကွောကျစိတျကိုမရှိတာ။ မျောဒယျသငျတနျးတကျနတေဲ့အခြိနျမှာ သရုပျဆောငျလညျး ဝါသနာပါတယျ။ စံကားဝါ သရုပျဆောငျသငျတနျး ကိုတကျခဲ့တယျ။ သငျတနျး မှာ ဆရာ တှကေ အရှထှေ့ကျပွီးတဈခုခု လုပျပွရမယျ။
ဘယျသူထှကျမလဲမေးရငျ အမွဲတမျးအရှထှေ့ကျခဲ့သူပါ။ ရဲဒငျးပုဆိနျလို့တောငျချေါကွတယျ။ လူလညျးမကွောကျ ဘူး၊ေ ကွာကျစိတျလညျးမရှိဘူး။ ကြောငျးမှာလညျး အဲလိုပဲ။ ယောကျြားလေးတှနေဲ့လညျး ရနျဖွဈတယျ။အခနျးထဲမှာ ဆရာ မရှိရ ငျ အတနျးဗိုလျပဲ။
ကွောကျစိတျမရှိတာ ဘယျမှာပွဿနာတတျလညျး ဆိုတော့ မှတျမှတျရရပဲ။ ကိုခနျ့နဲ့ဇာတျကား စရိုကျတယျ။ ငိုရတဲ့ဇာ တျကား ဒါရိုကျတာက ဦးမြိုးမငျး။ အဲဒီကားမှာ ငိုရမှာ။ ကိုခနျ့လညျး ငိုနပွေီ။ ကိုခနျ့နဲ့အပွိုငျငိုရမှာကို မကျြရညျက လုံးဝ မကဘြူး။
လူကွီးတှဘေယျလိုပွောပွော ဘယျသူကိုမှ မကွောကျပဲ မငိုတာလေ။ ဘယျလိုမှလညျး သငျလို့မရဘူးဖွဈနတေယျ။ အဲဒီမှာအမကေ စိတျဆိုးပွီး ဝငျဆူမှငိုလို့ရသှားတာ။ ဒါကတော့ မှတျမှတျရရပဲ။ နောကျတော့လညျး လူကွီးတှကေ သမီးရေ…ဒီလိုလေးလုပျလိုကျဆိုလညျး လုပျလိုကျတာပဲ။
တဖွညျးဖွညျးနဲ့တော့ သရုပျဆောငျပညာကို နားလညျလာသလိုတော့ရှိလာပွီ အကုနျလုံးတော့ မသိသေးဘူးပေါ့လေ… ပညာဆိုတာ သငျယူလို့မှ မကုနျတာကိုနျော ယခုဆိုရငျ ရှမှေုနျရတီ ဆိုတဲ့ နာမညျတဈခုဟာဇာတျကားတှေ ရိုကျရငျးနဲ့မှ အနုပညာပြိုးခငျးရဲ့အဈကို ဆရာတှရေဲ့ သငျကွားပေးမှု၊ ဝါရငျ့ အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ လကျ တှဲချေါမှုတှကွေောငျ့ ပရိ သတျ အသိမှတျပွုတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ နရောတဈခုအောငျမွငျမူတဈခုရဲ့နောကျကှယျမှာ ထိုးနှ ကျခကျြဆိုတာရှိစမွဲပါပဲ။ သူမက အဲဒီလိုအဖွဈအပကျြတှကေို ဘယျလိုခံယူထားလဲ။
“ပတျဝနျးကငျြ က တဈခုခုပွောရငျ သူတို့ဘာ လို့ ပွောတာလဲဆိုတဲ့အတှေးလေးတဈခုပဲရှိတယျ။ သူတို့ ငါ့ကိုဘာလို့ ဒီလိုပွောတာလဲ၊ ပွောရကျလိုကျတာဆိုမြိုးတော့ တှေးတယျ။
နာကွညျးတာစိတျဆိုးတာမြိုး မရှိဘူး။ ဘယျသူတှေ ဘာပွော ပွောပါ ကိုယျလုပျရမဲ့အလုပျတဈခုရယျ ဘာကို အကောငျးဆုံး ကွိုးစားရမလဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ပဲ အကောငျးဆုံးလုပျခဲ့တယျ။ နောကျလညျး အဲဒီလိုပဲ ဖွဈမှာပါ”